Madaxweynaha Somaliland Oo qaabilay Madaxweynaha Shirkadda Genel Energy Oo Socdaal ku yimid dalka | Somaliland.Org
Madaxweynaha Somaliland Oo qaabilay Madaxweynaha Shirkadda Genel Energy Oo Socdaal ku yimid dalka
November 6, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo oo ay weheliyaan Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Mudane C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici) iyo Xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wefti sare oo ka socda Shirkada General Energy oo mudooyinkii u danbeeyay hawlo sahan baadhis shiidaal dalka ka waday.
Weftigan oo uu hogaaminayay Madaxweynaha Shirkadaasi General Energy MahMet iyo Agaasimaha Fulinta ee Shirkadaasi Tony Hay-ward oo saaka ka soo degay madaarka magaalada hargaysa waxaa ku qaabilay Wasiirka Wasaarada Macdanta,Biyaha Iyo Tamarta ee Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale .
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland iyo Xubnaha Weftigu waxay ka wada hadleen arrimaha baadhista iyo sahaminta shiidaalka,iyadoo ay Madaxweynaha Gudoonsiiyeen Bilad ay Shirkada General Energy ku maamuustay .
Wasiirka Wasaarada Macdanta,Biyaha iyo Tamarta ee Somaliland Muddane Xuseen Cabdi Ducaale iyo Agaasimaha Fulinta ee shirkadaasi Tony Hayward oo warbaahinta kula hadlayay markii uu dhamaaday kulanku ayaa waxa uu wasiirka macdanta iyo biyuhu sheegay in socdaalka weftigani yahay kii u horeeyay ee noociisa ah isla markaana ay dalka u yimaadeen hawl galo dhinaca baadhista Shiidaalka iyo Sahamintiisa.
Wasiirku waxa uu tilmaamay in sannadka soo socda ay shirkadani si rasmi ah dalka uga bilaabi doonto qodista ceelkii ugu horeeyay ee shiidaal laga baadi goobayo,isagoo intaas ku daray in rajada somaliland ee Shiidaal helistu ay tahay mid aad u saraysa.
Agaasimaha Fulinta ee Shirkada Genel Energy Mr Tony Hay-ward ayaa isaguna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin sida qiimaha leh ee Xukuumada Somaliland u soo dhawaysay isaga iyo weftigoodaba.
Waxa uu sarkaalkani xusay oo kale inay si niyad sami ah u sii ambo qaadi doonaan hawlaha Sahaminta Shiidaalka isla markaana ay ku maal gelinayaan lacag ka badan Afartan Milyan oo dollar waxaanu u rajeeyay Shacabka Somaliland inay u soo saari doonaan Shiidaal Sannadka 2014ka .
Wasiirka wasaarada arrimaha dibada ee Somaliland Mudane Maxamed C/laahi Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay u tahay Somaliland guul u soo korodhay,maadaama laga dhabaynayo in la soo saaro Shiidaalka oo ka mid ah Khayraadka uu dalkani leeyahay .
Dhinaca kale, waxa saaka weftigan ku soo dhaweeyay madaarka Hargeysa Wasiirka Macdanta iyo Biyaha iyo Wasiirka khaarajiga.
Wasiirka Macdanta iyo biyaha Md. Xuseen Cabdi Ducaalle (Guray) oo ka hadlay socdaalka weftigan ka socda shirkada Genel Energy, waxaanu yidhi “Waxaanu halkan ku soo dhaweenaynaa wefti culus oo runtii Madaxdii shirkada Genel Energy oo dhan ayaa maanta halkan inoogu yimi oo Wada-shaqayn ay ka dhaxayso Wasaarada Macdanta iyo Biyaha oo waxa Madaxda shirkada la socda dadkoodii u shaqeynayey ee aqoonta u lahaa baadhista shidaal iyo Madax kale oo badan. Waxa kale oo weftigan ila soo dhaweenaaya Wakiilkooda halkan u fadhiya shirkada Somaliland Ibrahim Maxamed Hassan.”
Wasiirka Madaxdanta oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “markaa runtii farxad aad iyo aad u wayn ayey noo tahay in shirkad baxadaas leh ay Madaxdeedii u sareysay oo dhami ay halkan maanta Somaliland marayaan. Ujeedada ay u yimadeen ma aha uun safar yar is-kaga yimadeen ee waxay u yimadeen shaqo culus oo dalka ka qabanayaan. Maalgashi badana ku kacaysa. Sida uu idiin sheegay madaxa shirkadu waxay dhawaan bilabayaan sahmintii . Ceel dhaqso ah ayaynu dalkeena ka qodaynaa haddii uu Illahay ka dhigo.”
Wasiirka Waaarada arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar ayaa isaguna ka hadlay faa’ii dada ay dalka u leedahay shiidaal qodista, waxaanu yidhi “Waxa sharaf iyo qadarin Somaliland u ah in wefti aad iyo aad u baladhan uu dalka Somaliland booqasho ku yimi, kaas oo ah shirkada way nee Genel Energy. Waa shirkad ku taqasuustay Saliida cilmi baadhsteeda. Sharaf ayey u tahay in shirkad sidaas u baxad wayni ay go’aan ka qaadatay baadhista shidaalka Somaliland oo ay maalgashi ku samayso dalka, kana shaqayso khayraadka dalkeena ku jira.”
Maamulaha guud ee Shirkada Genel Energy Tony hayward oo isaguna halkaas ka hadlay waxa uu sheegay inay bilabayaan marshuuc sahmin shidaalka, isla markaana ay ku maalgalinayaan lacag gaadhaysa afartan kun oo Dollar (40,000 oo Dollar), taas oo labilabaayo sannadka 2014-ka ceelka ugu horeeya ee Somaliland ka qodoyaan.
Previous PostObama Iyo Romney oo dagaal adagi ku dhex maray doorashada maraykankaNext Post“Cid kasta oo Xil ka qabata Soomaaliya waa dambiile, waxaana laga qaadayaa tallaabo sharci ah”	Blog